1 Ihe E Mere 29:1-30
29 Devid bụ́ eze wee gwa ọgbakọ+ ahụ dum, sị: “Sọlọmọn nwa m, onye Chineke m họọrọ,+ bụ obere nwa,+ isi akabeghịkwa ya, ma ọrụ a dị ukwuu; n’ihi na nnukwu ụlọ a abụghị maka mmadụ,+ kama ọ bụ maka Jehova Chineke. 2 Emewo m otú ike m hà+ n’ịkwadebe+ ọlaedo+ maka ihe ndị a ga-eji ọlaedo rụọ n’ụlọ Chineke, nakwa ọlaọcha maka ihe ndị a ga-eji ọlaọcha rụọ, nakwa ọla kọpa maka ihe ndị a ga-eji ọla kọpa rụọ, ígwè+ maka ihe ndị a ga-eji ígwè rụọ, nakwa osisi+ maka ihe ndị a ga-eji osisi rụọ; nkume ọnịks,+ tinyere nkume a ga-eji ụrọ siri ike doo, nakwa obere okwute ndị tụrụ àgwà, nakwa nkume ọ bụla dị oké ọnụ ahịa, nakwa nkume alabasta dị ukwuu. 3 Ebe ihe metụtara ụlọ Chineke m masịrị m,+ m ka nwere ihe onwunwe pụrụ iche,+ ya bụ, ọlaedo na ọlaọcha; m na-enye ya maka ụlọ Chineke m ma e wezụga ihe niile m kwadebeworo maka ụlọ ahụ dị nsọ:+ 4 puku talent ọlaedo atọ, bụ́ ọlaedo si Ofa,+ nakwa puku talent ọlaọcha asaa a nụchara anụcha, maka itechi ahụ́ ụlọ; 5 ọlaedo bụ maka ihe ndị a ga-eji ọlaedo rụọ, ọlaọcha maka ihe ndị a ga-eji ọlaọcha rụọ nakwa maka ọrụ niile ndị omenkà ga-arụ. Ònye n’ime unu na-ewepụta onwe ya iwetara Jehova onyinye taa?”+ 6 Ndị isi+ ọnụmara dị iche iche+ na ndị isi+ nke ebo dị iche iche n’Izrel na ndị isi nke otu puku otu puku ndị agha+ na ndị isi nke otu narị otu narị ndị agha+ na ndị isi na-ahụ maka ọrụ+ eze wee wepụta onwe ha. 7 Ha wee nye ọlaedo ruru puku talent ise na puku ego darik iri na ọlaọcha ruru puku talent iri na ọla kọpa ruru puku talent iri na asatọ na ígwè ruru otu narị puku talent+ maka ozi a ga-eje n’ụlọ ezi Chineke. 8 Ndị nwere nkume nyere ha ka e debe ha n’ụlọ nkwakọba akụ̀ nke dị n’ụlọ Jehova, nke Jehayel+ onye si n’agbụrụ Geshọn+ na-elekọta. 9 Ìgwè mmadụ ahụ wee ṅụrịa ọṅụ n’ihi onyinye afọ ofufo ha nyere, n’ihi na ha ji obi zuru ezu nye Jehova onyinye afọ ofufo;+ ọbụna Devid bụ́ eze ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu.+ 10 Devid wee gọzie+ Jehova n’ihu ọgbakọ+ ahụ dum, Devid wee sị: “Ka gị onwe gị, Jehova bụ́ Chineke Izrel+ bụ́ nna anyị, bụrụ onye a gọziri agọzi+ malite na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi. 11 Jehova, gị onwe gị nwe ịdị ukwuu+ na ike+ na ịma mma+ na ebube+ na nsọpụrụ;+ n’ihi na ihe niile dị n’eluigwe na n’elu ụwa bụ nke gị.+ Jehova, Onye na-emekwa onwe ya ka ọ dị elu dị ka onyeisi nke mmadụ niile,+ ọ bụ gị nwe alaeze.+ 12 Akụnụba+ na ebube+ si n’aka gị, ọ bụkwa gị na-achị+ ihe niile; ike+ na ịdị ukwuu+ dị n’aka gị, ikike ime ka a dị ukwuu+ na inye mmadụ niile ume+ dịkwa n’aka gị. 13 Ugbu a, Chineke anyị, anyị na-ekele+ gị ma na-eto+ aha ọma+ gị. 14 “Ma, ònye ka m bụ,+ ole ndị ka ndị m bụkwa, nke na anyị nwere ike inye onyinye afọ ofufo dị otú a?+ N’ihi na ihe niile si n’aka gị,+ ọ bụkwa n’aka gị ka anyị nwetara ihe anyị nyere gị. 15 N’ihi na n’ihu gị, anyị bụ ndị mbịarambịa na ndị ọbịa+ dịkwa ka ndị nna nna anyị niile. Ụbọchị ndụ anyị n’elu ụwa dị ka onyinyo,+ olileanya adịghịkwa. 16 Jehova bụ́ Chineke anyị, ihe a dum anyị kwadebere iji wuoro gị ụlọ maka aha nsọ gị si n’aka gị, ha dum bụ nke gị.+ 17 Chineke m, amaara m nke ọma na ị bụ onye na-enyocha obi,+ nakwa na ịkwụwa aka ọtọ na-atọ gị ụtọ.+ Mụ onwe m ji obi ziri ezi nye ihe ndị a niile n’afọ ofufo, obi dịkwa m ụtọ ịhụ ndị gị bịara ebe a ka ha na-enye gị onyinye n’afọ ofufo. 18 Jehova bụ́ Chineke Ebreham, Aịzik na Izrel bụ́ ndị nna nna anyị,+ biko, mee ka ihe a bụrụ ọchịchọ obi ndị gị ruo mgbe ebighị ebi,+ meekwa ka obi ndị gị dịrị n’ebe ị nọ.+ 19 Nyekwa Sọlọmọn nwa m obi zuru ezu+ iji na-edebe ihe i nyere n’iwu,+ ihe àmà gị+ na ụkpụrụ gị,+ nakwa iji na-eme ihe niile, nakwa iji wuo nnukwu ụlọ+ a nke m meworo nkwadebe maka ya.”+ 20 Devid wee gaa n’ihu ịgwa ọgbakọ ahụ dum,+ sị: “Ugbu a, gọzienụ+ Jehova bụ́ Chineke unu.” Ọgbakọ ahụ dum wee gọzie Jehova bụ́ Chineke ndị nna nna ha, hulatakwa+ kpọọrọ Jehova isiala,+ kpọọkwara eze. 21 Ha wee na-achụrụ+ Jehova àjà nkịtị, na-achụkwara Jehova àjà nsure ọkụ+ n’echi ya, ya bụ, otu puku oké ehi, otu puku ebule, otu puku ụmụ ebule, na àjà ihe ọṅụṅụ ha,+ chụọkwa ọbụna àjà dị ukwuu maka Izrel dum.+ 22 Ha wee jiri oké ọṅụ na-eri ihe ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ n’ihu Jehova n’ụbọchị ahụ;+ ha wee mee Sọlọmọn nwa Devid eze+ nke ugboro abụọ, tee ya mmanụ maka Jehova ka ọ bụrụ onye ndú,+ teekwa Zedọk+ mmanụ ka ọ bụrụ onye nchụàjà. 23 Sọlọmọn wee malite ịnọkwasị n’ocheeze+ Jehova dị ka eze n’ọnọdụ Devid nna ya, o nwekwara ihe ịga nke ọma,+ ndị Izrel dum na-erubekwara ya isi. 24 Ndị isi niile+ na ndị dike+ nakwa ụmụ niile Eze Devid mụrụ+ doro onwe ha n’okpuru Sọlọmọn bụ́ eze. 25 Jehova wee na-eme ka Sọlọmọn dị nnọọ ukwuu+ n’anya Izrel dum, meekwa ka o nwee ebube nke ọ na-enwebeghị eze ọ bụla chịrị Izrel tupu ya onwe ya nwere ụdị ya.+ 26 Ma Devid nwa Jesi chịrị Izrel dum;+ 27 ụbọchị ọ chịrị Izrel dị afọ iri anọ.+ Ọ chịrị afọ asaa na Hibrọn,+ chịakwa afọ iri atọ na atọ na Jeruselem.+ 28 O wee nwụọ mgbe o mere ezigbo agadi,+ ụbọchị ndụ ya na akụnụba+ na otuto+ jukwara ya afọ; Sọlọmọn nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya.+ 29 Ma ihe ndị metụtara Devid bụ́ eze, ma ndị mbụ ma ndị ikpeazụ, e dere ha n’okwu Samuel onye ọhụ ụzọ+ nakwa n’okwu Netan+ onye amụma nakwa n’okwu Gad+ onye ọhụụ, 30 tinyere ọbụbụeze ya dum na ike ọ kpara na ihe ndị mere n’oge+ ọ nọ ndụ nakwa n’Izrel na alaeze niile nke ala dị iche iche.+